Ilaah weligiis ma joojiyo jacaylka, Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Ma ogtahay in dadka badankood Eebbe rumeeyaan ay ku adag tahay inay rumeystaan ​​inuu Ilaahay iyaga jecel yahay? Dadku way u fududahay in la qiyaaso ilaahay abuuraha iyo garsooraha, laakiin aad bay u adag tahay in loo arko Ilaah inuu yahay kan jecel oo xannaaneeya iyaga. Laakiin runtu waxay tahay in Ilaaheena aan dhamaadka lahayn jecel, abuur, iyo Eebbe qumman yahay uusan u abuurin wax kasta oo ka soo horjeedda isaga, taasi waa mid isaga ka soo horjeedda. Wax kasta oo Eebbe abuuray waa wanaagsan yihiin, muujinta kaamil ahaana ee guud ahaan kaamilnimadiisa, abuurkiisa iyo jacaylkiisaba. Meel kasta oo aan ka helno wax ka soo horjeedda - nacayb, kalitalisnimo, hunguri, cabsi iyo cabsi - maahan maxaa yeelay Ilaah sidan ayuu u abuuray.
Waa maxay sharku aan ahayn qalloocinta wax markii hore fiicnaa? Wax kasta oo Eebbe abuuray, oo ay ku jiraan bini'aadamka, aad bay u fiicnaayeen, laakiin waa xadgudubka abuuritaanka ee shar sameeya. Waxay u tahay maxaa yeelay waxaan u adeegsaneynaa xorriyadda wanaagsan ee uu Eebbe ina siiyay si qaldan si aan nafteena uga fogeynno Ilaaha ah isha asalkeena, halkii aan isaga u dhowaan laheyn.
Maxay taasi innaga innaga yeelaysaa? Si fudud tan: Ilaah wuxuu inaga abuuray qoto dheer yahay jacaylkiisa aan is bedel lahayn, iyo kaamilnimadiisa aan dhammaadka lahayn ee aan dhammaystirnayn iyo abuurkiisa xoogga. Taas macnaheedu waa inaan caafimaad qabno oo hagaagsan nahay, siduu innaga abuuray. Laakiin maxaa ku saabsan dhibaatooyinkeena, dembiyadayada iyo khaladaadkeenna? Kuwani dhammaantood waa natiijooyinka xaqiiqada ah inaan ka tagnay Ilaah, inaan isku aragno nafteenna inay yihiin halka ay ka yimaadeen innagoo aan ahayn Eebaha ina abuuray oo dhawraya nolosheena.
Haddii aan ka leexanay Ilaah oo aan ku soconno jidkeenna, aan ka baxno jacaylkiisa iyo naxariistiisa, markaa ma arki karno wuxuu isagu run ahaantii yahay. Waxaan u aragnaa inuu yahay garsoore cabsi leh, qof laga baqo, qof sugaya inuu na dhaawaco, ama inuu uga aarguto wixii qalad ah oo aan sameynay. Laakiin Ilaah sidaas ma aha. Had iyo jeer waa wanaagsan yahay marwalbana wuu jecel yahay.
Wuxuu doonayaa inuu ina barto, oo aan la kulanno nabaddiisa, farxaddiisa, jacaylkiisa qaaliga ah. Badbaadiyeheenna Ciise waa muuqaalka dabeecadda Ilaah oo wax walba wuxuu ku adeegsadaa eraygiisa xoogga (Cibraaniyada 1,3). Ciise wuxuu ina tusay in Ilaah inala jiro, in kastoo aan isku daynay inaan iska fogaan karno isaga, wuu ina jecel yahay. Aabeheenna jannada ayaa naga rajeynaya inaan ku noqonno gurigiisa.
Ciise wuxuu u sheegay sheeko laba wiil. Midkood baa sidii aniga iyo aniga ahaa. Wuxuu rabay inuu noqdo udub dhexaadka aduunkiisa oo uu naftiisa u abuuro naftiisa. Markaa wuxuu sheegtey badh dhaxalkiisa wuxuuna ku orday ilaa iyo inta uu kari karo, isagoo nool kaliya si uu naftiisa u qanciyo Laakiin dadaalkiisa si uu naftiisa u farxiyo oo naftiisa ugu noolaado ma uusan shaqeyn. Markuu sii kireystay lacagtiisa dhaxalka naftiisa, waxa sii xumaaday inuu dareemo oo uu sii xumaado.
Moolka qoto dheer ee noloshiisa dayacay, fikirradiisi waxay ku noqdeen aabihiis iyo gurigiisii. Muddo kooban, daqiiqad dhalaalaya ayuu fahmay in waxkasta oo uu runtii doonayo, waxkasta oo uu runti ubaahan yahay, waxkasta oo farxad geliyay farxadna ay tahay in laga helo guriga aabihiis. Awooddii daqiiqaddan runta ahayd, ee daqiiqad yar oo xiriir ah qalbigiisa aabihiis uu ka go'ay, wuxuu iskaga jeexjeexay boodhka doofaarka wuxuuna bilaabay inuu gurigiisa tago, isagoo la yaaban inuu aabihiis mid uun wada haysto. nacas iyo lumay wuxuu noqon lahaa.
Waad ogtahay sheekada inteeda kale - waxaad ka heli kartaa Luukos 15. Aabihiis ma soo qaadin mar labaad, wuxuu arkay isagoo soo socda intuu weli fogaa; wuxuu si dhab ah u sugayay wiilkiisa canugga ah. Oo isna wuu ku orday inuu ka hor tago, isaga dhunkado, oo isna ku shubo jacaylkii uu mar walba u lahaa. Farxaddiisu aad bay u weynayd oo waxay ahayd in la xuso.
Waxaa jiray walaal kale, kan weyn. Waa kii ku hadhay aabihiis, oo aan cararin oo aan noloshiisa burburin. Markuu walaalkani maqlay xafladi, wuxuu xanaaqay oo ka xanaaqay walaalkiis iyo aabihiis mana uusan dooneynin inuu gudaha galo. Laakiin aabihiis isaguna isagay u soo baxeen isaga oo isla jacaylkaas la hadlay oo isna ku xoojiyay jacayl aan xad lahayn oo uu ku xoojiyay wiilkiisa xun.
Walaalkii weynaa ma ugu dambeyntii wuu jeestay oo ka qeyb qaatay dabaaldeggii? Ciise taas uma uusan sheegin. Laakiin sheekadu waxay noo sheegeysaa waxaan dhamaanteen u baahanahay inaan ogaano - Ilaah waligiis ma joojiyo inuu na jeclaado. Isagu wuxuu inoo rajeynayaa inaan soo noqonno oo dib ugu noqonno isaga, mana ahan su’aal laga qabo inuu cafiyo, aqbalno, oo na jeclaan doono maxaa yeelay isagu waa Ilaaha Aabbeheen ah, oo jacaylkiisa aan dhammaanayn uu had iyo goor isku mid yahay.
Waqtigaa miyaad u baahan tahay inaad ka joogsato orodka Ilaah oo aad ku noqotid gurigiisa? Ilaah wuxuu inaga dhigay kuwo dhammaystiran oo dhammaystiran, muuqaal cajiib ah oo ku jira daaqaddiisa quruxda badan ee jacaylkiisa iyo xooggiisa abuurkiisa. Waana weli. Waa inaan u leexanaa oo aan dib ula xiriirnaa Abuurahayaga, oo weli innaga jecel maanta, sidii uu noo jeclaaday markii uu noogu yeeray inaan noqono.